पाँचतला भनेर १७ तला बनाइयो | Kendrabindu Nepal Online News
पाँचतला भनेर १७ तला बनाइयो
२३ श्रावण २०७६, बिहीबार ०९:०४
भक्तपुरको मध्यपुर थिमी चोकदेखि करिब एक किमीको हाइवे सडक पार गरेपछि राधेराधे चोक आउँछ । चोकमै अडिएर यसो अघिल्तिर नियाल्दा सामुन्ने एउटा निर्माणाधीन अवस्थाको अग्लो भवन देखिन्छ ।
भक्तपुर–काठमाडौं ओहोर–दोहोर गर्ने यात्रुले आजकाल यो भवन देख्दा प्रश्न गर्छन्, यत्रो अग्लो भवन कसले के प्रयोजनको लागि बनाउँदै होला ? लामो समयसम्म निर्माणाधीन अवस्थामा रहेको यो भवन निर्माण कार्य थालिएको झण्डै १० वर्ष बितेको छ । तर, निर्माण कार्यले भने अझै पूर्णता पाएको छैन बरु विवाद थपिएको छ ।
राधेराधे चोकस्थित करिब ६ रोपनी ३ आना क्षेत्रफलमा बनेको यो भवन अवैध रहेको मध्यपुर थिमी नगरपालिकाले जनाएको छ । सुरुमा आवासको लागि निर्माण गर्ने मापदण्ड र नक्सा बनाएर निर्माण गर्दागर्दा नक्सा परिवर्तन गरेर पाँचतारे होटल खोल्ने प्रयाश भएको नगरपालिकाका मेयर मदनसुन्दर श्रेष्ठले बताए।
उनले मापदण्ड विपरीत निर्माण भएपछि नगरपालिकाले निर्माणाधीन अवस्थामा रहेको भवनको काम रोकेको बताए। नगरपालिकाभित्र बन्ने भवनबारे नगरपालिकालाई नै जानकारी नदिएकाले त्यसबारे अनुसन्धान गर्न तत्कालका लागि निर्माण कार्य रोकिएको श्रेष्ठको भनाइ छ । उनले भने, ‘पाँच तलाको स्वीकृत लिएर १७ तला बनाइयो । राजकुलो पुरेर नगरपालिकाको बीचमा यस्तो अग्लो भवन बनाउनु गैरकानुनी थियो । भवन बनिहाल्यो अब भत्काउने कुरा भएन । राजकुलो र सडकको जग्गा छुट्याइदिएपछि मात्रै यसमा नगरपालिका सहमत हुन्छ । ’ उनले दुईवटा भवन बनाएपछि ५ तले भवनको मात्रै स्वीकृति भएकाले त्यसबारे नगरपालिकाले आवश्यक कारबाहीसमेत गर्ने जानकारी दिए ।
पाँचतला, बनाइयो, भनेर १७ तला
Prevदूध र मासुमा आत्मनिर्भर हुँदै प्रदेश नं. ३
अफगानिस्तानमा गएको भूकम्पको धक्का भारत र पाकिस्तानसम्मNext